Cilmi-nafsiga iyo Xiriirka Iska ogow
Inkastoo kororka tirada guud ee dadka qaba RAS (autism spectrum disorders), midna kama hadli karo horumarka cudurka autism. Marka laga hadlayo daawada casriga ah, waxaa jira sharaxaad cad oo fekerka noocan oo kale ah sida maskaxda autism. Shuruudaha aqoonsiga iyo ogaanshaha ayaa noqday mid aad u cad, taasoo macquul ah in lagu ogaado xanuunada noocan oo kale ah xitaa inta ugu yar.
Muxuu yahay maskaxda autism macnaheedu?
Dhismaha shakhsi kasta shakhsi ahaaneed waxaa ka mid ah afar arrimood oo muhiim ah (hoos yimaada):
Sifooyinka qooyska . Kuwaas waxaa ka mid ah, ugu horreyntii, mawduucyada aadanaha, hababka fikirka-farshaxanka ama falanqaynta.
Noocyada hababka maskaxda . Mabaadi'daas waxaa ka mid ah dhammaan muuqaalada dareenka, dareenka, awoodda iyo astaamaha muujinta dareenka , xasilloonida ama xasilloonida dabeecadda.
Guryaha bulshada . Dhammaan noocyada iyo dabeecadda isgaadhsiinta caalamka dibadda, nooca caalamiga ah, tayada akhlaaqda, wadooyinka, rabitaanka iyo danaha dadka.
Heerka diyaargarowga . Awood u lahaanshaha helitaanka iyo isticmaalka aqoonta, xirfadaha waxqabadka, dabeecadaha qaarkood iyo heerka jirdhiska nolosha.
Nooca autisticity ee shakhsiyadeed ayaa la aasaasay iyadoo loo eegayo saddex dabeecadood, kaas oo ilaa xad ah oo muujinaya, laga bilaabo carruurnimada. Kuwaas waxaa ka mid ah:
ku xadgudubka isgaadhsiinta aduunka oo dhan, oo ay ku jiraan waalidka iyo qoyska;
la'aanta wada-xaajoodka bulshada, mararka qaarkood dhamaystiraan diidmada inay la xiriiraan bulshada;
noocyo kala duwan oo xiiso leh iyo dabeecad dib u celin ah.
Dadka qaba cudurada autism-ka waxay ku kala duwan yihiin nolol gudaha ah, xor ka ah noloshii dibadda, dareenka iyo dareenka aad u liita. Nolol maalmeedka, tani waxaa lagu muujin karaa xiriir la'aanta dhamaystiran ee adduunka ku hareereysan, laga bilaabo maqnaanshaha iyo horumarka hadalka, si loo dhameeyo dhamaystirka dadka. Taasi waa, dadka sida aad u dareen ahaan, gaar ahaan kuwa dibedda jooga, inta badan ma falaan magacooda magacooda oo indhaha ha eegin.
Nooca autistic-ka ah ee fekerka waxaa lagu gartaa adoo adduunka ka mid ah waayo-aragnimadiisa iyo daciifinta xiriirka aduunka dhabta ah. Xaaladaha qaarkood, dadka qaba cuduradaas la mid ah waxay yeelan karaan karti gaar ah oo muuqaal leh (calaamadaha difaaca), oo leh, waxbarashada saxda ah, waxay ku guuleysan kartaa inay ku guuleystaan ​​xirfadahooda.
Filimada Haweenka si ay u kiciyaan Niyadda
Hysteria - sababaha iyo hababka daaweynta
Fikradda shakhsiga ee cilmi nafsiga
Korsakovsky syndrome - sabab, calaamado iyo daaweyn
Ciyaarta "Blue Whale" - nooca cayaarta iyo sida loo ilaaliyo ilmaha?
Maxaad weydiisan kartaa ninka?
Sidee looga takhalusaa cabsi iyo shaki la'aan?
Daaldeg degdeg ah - sababaha
Jeansyada leh daabacaadda dhirta ee 2013
Maxaan u fiirin karnaa aaska si aan u galno daaqada?
Naftaada u diyaarso
Ku dheji gadhka iyo shaaribada
Moodhadhka leh saamaynta soo jiidashada
Cajal naxaas ah
Sidee loo dhigi karaa orchid guriga?
Vatican - xaqiiqooyin xiiso leh
Waa maxay epidural'ka dhalmada?
Scarlett Johansson ayaa loo aqoonsaday inuu yahay mulkiilaha ugu caansan dunida
Demi Moore ayaa sharraxday sababta ugu dhow ee loo soo sawiray ilko la'aan
Waaxda tamarta aadanaha